I-FGV Thayipha Ikhabethe Ikhabethe Ngokuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. . Ukucaciswa kwesilayidi se-FGV Type Drawer kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
I-Horp yekhabethe yekhabethe yekhabethe yezomnotho i-FGV yohlobo lwezomnotho kusuka ezengezo ze-addmith ezinobuhlakani obuhle kakhulu kanye nentengo ebizayo ye-
Ngosizo lomkhiqizo, ukukhiqizwa kungaqedwa ngendlela esheshayo futhi ebushelelezi, engaqinisekisa ukuqedwa kwephrojekthi emnqamulajuqu onikezwe.
UNowHow Isikhathi Sokulethwa?
Ukulethwa kwe-2.Fast: Sithembisa i-oda lakho lizothunyelwa kungakapheli inyanga eyodwa lapho setholwe idiphozithi. Ngesikhathi esiphithizelayo, isikhathi sethu sesikhathi sidinga ukulungiswa ngokufanele. Ukwaneliseka kwakho okuphelele kubaluleke kakhulu eqenjini lethu.
I-3.Price Deal: Sinikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamaphoyinti wentengo ahlukahlukene azokwenza kube lula kuwe ukwamukela izidingo zohlobo oluthile lwabakhona namakhasimende akhona.
Okumhlophe okumhlophe, ubisi olumhlophe, onsundu, omnyama, mpunga
0.6 / 0.65 / 0.7 / 0.75/ 0.8 / 0.85/ 0.9 / 0.95 / 1.0 / 1.1mm
10, +20/2 "+ 14, (16" / 20 "/ 22" / 22 "/ 24"
1. Isondo elijwayelekile (abs)
2. Isondo elijwayelekile (POM)
3. Isondo lomsindo wokuthula (hbte)
4. Isondo lomsindo wokuthula (abs)
5. Ukuthulisa umsindo wesondo (hbte)
Pack njengesidingo sakho. Izindleko ezengeziwe zizocelwa ukupakisha okhethekile njengebhokisi elinemibala, blowly ukupakisha, futhi njll.
1.Made wensimbi egqamile egqamile ebandayo, inqubo ebabazekayo yokufafaza i-powde powder, imelana nokudonsa futhi ayikho lula ukuyicima.
I-2.Simple Design, Rails Slide Rail, Thatha Isikhala Esincane Futhi Uthuthukise Ukusetshenziswa Kwendawo.
3.Kukahlole okuqinile kwekhwalithi, kungadonswa kalula izikhathi ezingaphezu kuka-50 000, futhi kungasekela izinto ngesisindo esingaphansi kwama-25 kg.
Ukukhethwa kwe-4.AcceceSceirioriories, singanikeza ngamasondo ahlukahlukene wezinto ezahlukahlukene ongazikhetha, ukuqinisekisa ukushelela okubushelelezi ngaphandle komsindo.
5.Imibala yamawashi amaningi ingenziwa ngokwezifiso, futhi ubukhulu bezinto ezibonakalayo anganikezwa ukuze bahlangabezane nezidingo zamakhasimende emazingeni ahlukene.
6.Unmulance-Scene, elungele ukusetshenziswa kwamakhabethe amancane akhanyayo anjengamawadi, amaphephabhuku, amatafula aseceleni kombhede, amadeski wekhompyutha, njll.